Real Estate Buyers Guide to Dubai - Real Estate Real Estate by Provident
Ny Tilikambo Fiambenana any Alemaina A
Dubai Creek Residence Tower 3 Atsimo
Emirà Hills Villas
Famaranana Villas Frond I
Ny Tilikambo Fiambenana Andrefana
Ny trano fonenana ao amin'ny Business Central
The Tower Torch
Acacia AvenuesAkoya (DAMAC Hills)Akoya OxygenAl BarariAl BarshaAl FurjanAl GarhoudAl GhadeerAl JaddafAl KaramaAl Khail HeightsAl QusaisAl SajaaAl SufouhAl WarsanAl WaslRanches AraboArabian Ranches 2Arabian Ranches 3ArjanBarsha Heights (Tecom)Bluewaters IslandBusiness BayCity WalkDeiraDIFCDiscovery GardensDowntown DubaiDowntown Jebel AliDubai Creek HarbourDubai Festival CityDubai HarbourDubai Healthcare CityDubai Hills EstateDubai Internet CityDubai Investment ParkDubai MarinaDubai Media CityDubai Atsimo-AtsinananaDubai World CentralDubailandEMAAR BeachfrontEmirates HillsMaitsoHamriyah Free ZoneIMPZInternational CityJBRJumeirahJumeirah Golf EstatesJumeirah HeightsJumeirah IslandsJumeirah Lake TowersJumeirah ParkJumeirah Village CircleJumeirah Village TriangleMeadowsMeydanLalana MeydanMina RashidMira OasisMohammad Bin Rashid CityMotor CityFandrianaNad Al ShebaOld TownPalm JumeirahPort RashidReemRemraamSatwaSerenaSheikh Zayed RoadSilicon OasisSports CitySpringsThe HillsThe LakesNy Tanàna MahasalamaThe ViewsTown SquareUmm SuqeimWorld Trade Center
TypeApartmentCommercialCommercial Full FloorCommercial Half FloorVilla VillaDuplexHalf FloorHotelHotel ApartmentLand CommercialFampiasana voamaina tanyLand ResidentialLoft ApartmentOFF PlanOfficePenthouseTrano fonenanaResidential Full FloorResidential Half FloorAntsinjaranyShopShow RoomTown HouseTownhouseVillaWarehouse
Ity torolàlana ity dia natao hamahana ireo endrika sy dingana isan-karazany amin'ny fividianana trano any Dubai. Mino izahay fa fahefana ny fahalalana, noho izany dia ilaina ny mahatakatra ny dingana ao amin'ny A hatramin'ny Z alohan'ny hanasonianao ny laharana voatondro.
Ny zom-pirenena rehetra, na any ampitan-dranomasina na mponina ao Dubai, dia afaka mividy ao amin'ny sehatry ny tranom-bakoka ao Dubai.
Amin'ny alalan'ny olona iray:
Pasipaoro ho an'ny mpividy rehetra
Signed Agreement Buyer fantatra amin'ny anarana hoe Form B
Amin'ny orinasa iray:
Fanamarinana ny fampidirana
Amin'ny orinasa vahiny:
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia tsy maintsy asongadin'ny Ambasady UAE
Amin'ny ankapobeny, ny governemanta Dubai dia manome visa momba ny fahazoan-dàlana ho an'ny tompona trano vaovao. Ireo dia hanaiky ny fitsipika sy fitsipika mifehy ny fifindra-monina ary mila havaozina isaky ny volana 6. Araka ny fitsipika amin'izao fotoana izao dia tokony ho mihoatra ny 1 tapitrisa AED ny trano voavidy mba hahazoana fahazoan-dàlana honenana.
Fahasoavana sy fanampiana
Ny freehold dia misy amin'ny ankamaroan'ny fivoaran-draharaha. Na izany aza, misy trano fananana ao Dubai izay misy fe-potoana 30-99 taona tokony tokony ho liana amin'ny antoko rehetra.
Misy andrim-panjakana maromaro any Dubai manolotra hetra amin'ny mpivarotra tsy tompon'ny trano. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny mpandraharaha dia manolotra tolotra mahafinaritra ho an'ny mpividy amin'ny fonosana miisa hatramin'ny 96% amin'ny sandan'ny fananana. Ny tsenam-bola amin'ny banky any Dubai dia orinasa haingam-pivoarana haingana ary banky maro no manolotra hetra ho an'ny tsy mponin'ny mponina, saingy misy fetrany ny karazana hetra azo raisina.
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fividianana trano tany Dubai dia io dia faritra tsy misy fandoavam-bola ary tsy misy ny hetra amin'ny vola lany. Rehefa mandefa ny lohan'ny fananana ny sampan-draharahan'ny tany ao Dubai, Tsy maintsy mandoa saram-pandraharahana 1.5% ny mpividy mifototra amin'ny vidin'ny fividianana.
Mba hividianana trano any Dubai, tsy mila banky ao an-toerana ny mpividy. Ny sampan-draharahan'ny mpanolotsaina iray ao an-toerana dia afaka ampiasaina izay afaka mandray ny vola alefanao amin'ny kaonty mpanjifa. Ny solombavambahoaka dia afaka mandamina ny fandoavam-bola rehetra hividianana ilay trano. Raha ny marina, raha omena ny mpisolo vava anao ianao amin'ny maha mpisolovava azy, dia tsy ilaina akory ny fanatrehanao amin'ny fotoana handefasana fananana. Izany dia afaka mametraka tsotra izao ny hividianana fividianana tsotra ho an'ireo mpanjifany any ampitan-dranomasina liana amin'ny tsenan'i Dubai Real Estate. Raha toa ianao ka manana ny kaontinao banky, dia azo atao mora foana koa ny manamboatra izany amin'ny alalan'ny mpiara-miasa amin'ny banky.
Ireo fepetra tokony hodinihina
Misy saram-pandaharana maromaro voakasika. Ny fisoratana anarana ao amin'ny anaran'ny tompon'ny fananana vaovao, dia takiana ianao handoa saram-pidirana ho an'ny Developer (Under Construction) na ny Departemantan'ny tany ao Dubai (nofenoina) arakaraka ny toerana misy ilay trano. Raha mividy tranokala ianao, dia misy ihany koa ny fandoavam-bola 0.25% ny sandan'ny trosa azo aloa amin'ny Développement na Dubai Lands Department.
Ankoatr'izay, raha tokony ho feno sy efa ampiasaina ilay trano hividiananao, dia misy ny fiantohana amin'ny asa fanompoana izay tsy maintsy aloa amin'ny mpivarotra eo amin'ny fototra. Manampy anao amin'ny alàlan'ny fividianana A hatramin'ny Z, mitaky ny saram-pandraharahana amin'ny 2% amin'ny vidin'ny fividianana amin'ny mpividy. Izany dia saram-pandraharahana izay azo alaina amin'ny fotoana hividianana trano.
Fanampiana amin'ny asa fanompoana
Ny saram-pandraharahana dia nomena vola mba hihazonana ireo sehatra sy toeram-piompiana samihafa eo amin'ny fiarahamonina na ny trano. Amin'ny ankapobeny, ny antoka dia ny fananana sy ny fitantanana araka ny tokony ho izy. Ao amin'ny ankamaroan'ny trano fanorenana trano vaovao sy trano fonenana manerana an'i Dubai, ny fiampangana ny saram-pandraharahana dia raisina amin'ny tompon'ny orinasa mpiara-miangona, ary angonin'ny manamboninahitra voatendry amin'ny anaran'ny fikambanana.
Amin'ny toe-javatra fampandraketana, ny fiampangana dia aloa amin'ny tompon-trano. Ny saram-pitaovana rehetra manerana an'i Dubai dia miovaova arakaraky ny faritra sy ny fiorenan'ny fananana. Ny fivoaran'ny vondrom-piarahamonina lehibe kokoa koa dia mitaky ny tompony tompony fiantohana fiaraha-miombon'antoka isan-taona, izay amin'ny ankapobeny no aloa amin'ny mpamorona ilay tetikasa.
Manoro hevitra ny mpividy rehetra izahay mba hahita ny adidiny amin'ny Fikambanan'ny tompony alohan'ny hividianana trano.
Mpandraharaha momba ny Mpamorona
Ny adidin'ny mpandraharaha amin'ny fanatanterahana sy famindrana ny fananana ara-potoana dia mifandraika amin'ny fifanekena amin'ny fifanarahana amin'ny varotra sy ny fividianana (na azo ampiharina, fifanarahana fifanarahana). Raha mbola tsy vita ny fananana, dia manome fe-potoana handraisana fe-potoana ny fifanarahana. Izany dia ahafahan'ilay mpandrindra hahalalahana ny haavon'ny fahafaham-po amin'ny fanitarana ny daty. Tahaka ny any amin'ny faritra hafa, ny mpividy dia tsy maintsy vonona ny miandry ny fahazoan-dàlana azo atao rehefa miandry ny fananana trano fanorenana. Raha vantany vao voatolotra ilay trano, ny mpandrafitra dia manana adidy hanome onitra 10 taona hitrandrahana ny fananana.
Ny fiantohana ny fahapotehana amin'ny fananana dia mifandraika amin'ny fifanekena, saingy mahazatra ny ao Dubai ho an'ny mpandraharaha hanamboatra ny fahavoazana ankapobe mandritra ny herintaona. Misy fitsipi-pifanaram-pahefana ampiharin'ny tanànan'i Dubai mikasika ny fahazoan-dàlana sy ny fifanarahana. Ny mpandrindra dia tsy maintsy mihazona ireo fenitra araka ny voalazan'ny fitsipika navoaka momba ny fanorenana trano, ary koa ny olana momba ny fiarovana.
Raha misy olana, ny fanampiana dia azo jerena avy amin'ny fifanarahana mifandray amin'ny mpandrindra. Mety misy ny fanekempihavanan'ny fananganana trano, izay matetika manome antoka ny amin'ny fahaiza-manao amin'ny 10 taona. Misy ihany koa ny code civile an'ny Emirà Arabo Mitambatra, izay misy fiarovana amin'ny fananganana fenitra. Ao amin'ny Code Civil, ny injeniera sy ny mpanolontsaina dia tompon'andraikitra amin'ny fahapotehan'ny rafitra amin'ny tranobe mandritra ny fe-potoana 10 taona.
Ahoana no hividianako trano?
Ny Provident Estate dia hahita ny fananana izay mifanaraka amin'ny filanao sy ny zavatra ilainao. Raha vao nanao sonia io fifanarahana io ianao, dia hanomboka ny fikarakarana ny fanananao sy ny toetra manokana anananao. Raha hitady ny toerana tadiavinao ianao ary misy vidiny mifandraika amin'ny mpivarotra, ny sandan'ny fametrahana 10% amin'ny vidin'ny mpifidy dia takiana amin'ny fehezan-dalàna mifototra amin'ny fifanarahana amin'ny Memorandum of Understanding (MOU) antsoina koa hoe Sale & Purchase Agreement (SPA).
Ity trano fitehirizam-bokatra ity dia natokan 'ny anay tamim-pitokisana Raha vantany vao nosoniavin'ny MOU / SPA ny anao sy ny mpivarotra, dia hampahafantatra anareo ny mpanolo-tsaina mpanjifa izay tompon'andraikitra amin'ny fanampiana anareo amin'ny dingana.
Ny famaranana ireo fepetra ireo dia ho vita na amin'ny Développement na Démographie de Développement Land de Dubai. Ny fomba fiasa sy ny fepetra fampitaovana dia samy hafa arakaraka ny toetoetry ny fananana izay mifototra amin'ny fanorenana na vita. Ny mpiara-miasa amintsika dia manome ny torolàlana sy fanampiana rehetra azo antoka mba hiantohana ny fananan-tany amin'ny anaranao ho toy ny malama sy mangingina malalaka araka izay azo atao.
Mividy ara-dalàna mandritra ny roa ka hatramin'ny enina herinandro ny mpividy mba hanatontosana ny "Preferred Transveyance Partners" izay handamina ny dingana arahinao mandra-pahavitan'ny fifindrana.
Afaka averiko amidy indray ve ilay trano?
Afaka mivarotra ny fanananao amin'ny olona ianao. Midika izany fa izy ireo dia handray ny fandoavam-bola hatao amin'ny Developer raha mbola eo an-dalam-panamboarana ny trano, na handoavana ny vola 100% noho ianao dia tokony hofenoina tanteraka ny trano.